isixeko : University of Ulm
isifinyezo : UU
Owadala : 1967
Musa ukulibala ukuba discuss University of Ulm
IYunivesithi Ulm na ngokulandelelana wesithoba e Baden-Wuerttemberg. Kwezimvo zokuqala owayengumseki kwiyunivesithi Ulm buya umva iminyaka engama-50. in 1959, iqela lophando “University of Ulm” kwasekwa, leyo livelise nememorandam kokuseka kwiyunivesithi Matshi 1961. Ngenxa kukhuphiswano phakathi emizini Constance kunye Ulm kwi nisaqala, ingcamango yokuseka kwiyunivesithi nganye zixeko zibini yathandwa. Into ebaluleke ekhokelela esi sigqibo yaba kukuba Constance imi kufutshane umda Federal. Amathuba engqesho entsimini yamayeza bendingayi kuba ezaneleyo ngenxa yokunqongophala kwendawo emvula isigulane emdeni. Ingcamango yokuseka kwiyunivesithi Ulm ngoko yaba eziphathekayo ngaphezulu – bekuya kuba yiyunivesithi eqingqwe amayeza kunye nenzululwazi ngezobugqi.
NgoJulayi 1965, yekomiti isiseko ingenise yayo “Imemorandam kwi College of Medicine kunye Natural Sciences Ulm,” esaye samkelwa imo Baden-Wuerttemberg ngayo liBhunga labaPhathiswa ngoJanuwari 1966. Kwiinyanga nje ezimbini emva, i “Siseko wexeshana Ulm College of Medicine kunye Natural Sciences” weza ukusebenza.
Uyafuna discuss University of Ulm ? nawuphi na umbuzo, izimvo okanye ncomo
University of eBonn eBonn